Wolrdpay ichave achitarisira manejimendi eDI online kubhadhara | Mahara emahara
Wolrdpay ichave achitarisira maneja epamhepo eDII epamhepo
DJI, pamwe nekambani Worldpay, achangobva kuburitsa nhau kuburitsa pachena kuti vese vasvika muchibvumirano chekubatirana kuitira kuti wekupedzisira ave mutariri wekubata zvese zvinobhadharwa pamhepo zveDII, chimwe chinhu icho, kune rumwe rutivi, chinobatsira iyo kambani china nyanzvi mune drone yenyika, inogona kuwedzera e-commerce chikuva uye usvike kune vakawanda vatengi pasirese.
Pfungwa yavanayo kuDII haisi imwe kunze kwekutora mukana iwo kugona kunopihwa naWolrdpay seyemumwe wevashandi vetekinoroji nekuda kwayo mbiri mbiri track uye pamusoro pezvose kune zvakanakira kupihwa nekadhi rako remuno senzira yekubhadhara inogona kupa. Kutenda kubatana uku DJI ichakwanisa kubatana nevatengi vanobva kunzvimbo dzakasiyana dzepasi nekuita kuti zvigadzirwa zvako zvioneke zvakanyanya kuwanika kune ese marudzi eeprofile profiles.
DJI naWolrdpay mudiwa kuunza muripo wemagetsi kune iyo DJI chikuva
Sezvakataurwa Christina Zhang, iyezvino DJI mubati wehomwe.
Musika wepasi rose wedrone wakaputika mumakore achangopfuura; vatengi vanowana nzira dzekugadzira dzekushandisa tekinoroji uye vanounza maonero matsva muhupenyu hwavo hwezuva nezuva. Ino inguva inonakidza kwazvo kune indasitiri. Sezvo tekinoroji yedu ichiva nyore kushandisa, nekuda kwekuwedzera kwekushandisa muchikamu, tinoda kuti madrones edu ave anowanikwa kune vanhu pasirese, zvese zvebasa nekutamba. Munguva pfupi iri kutevera, tinotarisira kusvika kune vatengi vatsva muEurope uye mudunhu reAsia-Pacific, pamwe nekugadzira chiitiko chisina musono uye chakachengeteka kune vatengi vedu vepamhepo nerutsigiro rweWorldpay yekubhadhara mhinduro.
Kune rumwe rutivi, Shane Happach, Executive Deputy President uye Director weGlobal Enterprise eCommerce kuWorldpay, Inc., akataura zvinotevera:
Kurwisana nevanyengeri pamhepo ndechimwe chezvinhu zvinonetsa zvevanogadzira zvemagetsi, kunyanya kana zvasvika kune ekucheka-kumucheto matekinoroji senge drones Chinetso chemabhizimusi ari kuwedzera kuenzanisa kutengesa kwepamusoro-soro nekwanisi yekuvimbisa vatengi basa rakachengeteka uye rakavimbika. Worldpay yakabatsira zviuru zvemakambani kutenderera pasirese kuti vawane chiyero ichi; Nekudaro, zvinowedzerwa naDII kusvika parizvino zvinoratidza kuti nzira yakakosha yekubiridzira ndeyekubudirira kwekuwedzera kwesangano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Drones » Wolrdpay ichave achitarisira maneja epamhepo eDII epamhepo
United Kingdom inodyara 25 mamirioni euros munzvimbo yekuvandudza matekinoroji matsva ekuvhiya
Iyo PP inotsvaga kusimudzira kudhinda kwe3D kwema prostheses nekubatanidza mainjiniya kumatimu ezvehutano aripo